ကုထုံးအစီအစဉ်ကိုမိတ်ဆက် — HunterThinks.com ကုထုံးအစီအစဉ်ကိုမိတ်ဆက် — HunterThinks.com
အနိမျ့ dopaminergic လှုပ်ရှားမှု.
အလုပ်မဖြစ် DMN (default Mode ကိုကွန်ယက်).
ယခင်က, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ neurotransmitters များ၏အလွန်အမင်းရှုပ်ထွေး interaction ကတစ်လုံလုံလောက်လောက်ခေတ်မီနားလည်မှုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, ဟော်မုန်း, ဗီတာမင်နှင့်အခြားအာဟာရပြည့်, ဤအမှုစနစ်များအတွက်ထဲကဓာတုပစ်စညျးထုတ်လုပ်ရန်သောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ, and the symptoms of improper functioning of these interactions. ပြီးခဲ့သည့်အတွက် 20 နှစ်ပေါင်း, ကျွန်တော်တို့ဟာအရာများစွာကိုလေ့လာသင်ယူကြပါပြီ, ဒီကျနော်တို့မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ယခုထိဒီဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်. အကြီးအကျယ်မသိဘဲဖြစ်ကြောင်းအပါအဝင်.
2007-2014 ကနေ, မျိုးစုံဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကသူတို့လေ့ကျင့်ရေးကိုသုံး, သူတို့ရဲ့အတှေ့အကွုံ, and my available patient data to diagnose me as well as they could. သူတို့ရဲ့ diagnoses တညီတညွတ်တည်းခဲ့ကြသည်: စိတ်ကျရောဂါ, ယေဘူယျစိုးရိမ်စိတ်ရောဂါ, PTSD, နှင့်ထိတ်လန့်ခြင်းရောဂါ. Let’s assume that their diagnoses are တရားဝင်သော (စစ်မှန်သောအရာတစ်ခုခုကိုတိုင်း); အဆိုပါ diagnoses တညီတညွတ်တည်းသောကြောင့်, သိပ္ပံနည်းကျယူဆရန်လွယ်ကူရဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု (reproducibility). ထိုအရဲ့ diagnoses တိကျမှုရှိပါတယ်ယူဆကြကုန်အံ့. သူတို့မဟုတ်, သို့သော်, သေချာသော.
စိတ်ကျရောဂါတစ်ခုတိကျရောဂါ, ဥပမာ, အဆိုပါစိတ်ကျရောဂါဆက်ဆံဖို့ဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြမထားဘူး. ကုထုံးစကားပြော, ဆေး, တချို့လူနာတွေအတွက် electroconvulsive ကုထုံးအားလုံးအလုပ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကတယောက်မျှမကျန်အားလုံးလူနာတွေအတွက်အလုပ်လုပ်. ဆေးဝါးများအတွင်း, လူနာအရာများစွာကိုတုံ့ပြန်စေခြင်းငှါ,, တိုးမြှင့် serotonin အပါအဝင်, တိုးမြှင့် dopamine, တိုးမြှင့်အာဟာရပြည့်, သို့မဟုတ်လျှော့ချရောင်ရမ်းခြင်း (အလေးအနက်ထား). သို့သော်သူတို့အားကုထုံးအဘယ်သူအားမျှလူတိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်. တစ်ဦးကစိတ်ကျရောဂါရောဂါကုသမှုရှာဖွေလုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များဘယ်တော့မှမဖြစ်. ထိုအခါအချိန်တွင်တစ်ဦးချင်းစီဆရာဝန်ငါ့ကိုရောဂါ, ကျွန်တော်တစ်ဦးထက်ပိုသောတိကျသောရောဂါဖြစ်စေခြင်းငှါလူ့ခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုအလုံအလောက်မသိခဲ့ပါ. ထို့အပွငျ, ယခုကျွန်ုပ်တို့အမှုအရာများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်အကြောင်းပိုမိုသိသော, ကျနော်တို့သေးအဖြေရှာတဲ့စမ်းသပ်မှုဖွံ့ဖြိုးပြီးကြပြီမဟုတ်: fMRI နှင့်အတူမျိုးစုံအစည်းအဝေးများ မှလွဲ., အရာညစ်ညမ်းသောစျေးကြီးသည်. ထိုအပင်ပိုမိုဆိုးရွား, အဘယ်သူမျှမ 5HT2A စုစုပေါင်း desensitization မည်ဟုမျှော်လင့်သောကွောငျ့, အဘယ်သူမျှမတစ်ဦးရောဂါပျောက်ကင်းအထူးလေ့လာခဲ့လိုက်ပါတယ်. ငါသာ 5HT2A upregulate မှလူသိများသုံးဆေးဝါးများတွေ့ကြပြီ. အကြှနျုပျ၏ဆရာဝန်များကသူတို့ကိုရရှိနိုင်သောအသိပညာနှင့် diagnostic tool များနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်, သူတို့ကိုငါ့အဘို့ရောဂါပျောက်ကင်းသတ်မှတ်ရန်အဘို့အဒါပေမယ့်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ရပြီလို.
ငါသည်ငါ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာများကိုတစ်ဦးတိကျတဲ့နားလည်မှုရှိခဲ့ခြင်းမပြုမီ, ငါ၏အဆရာဝန်များကငါ့ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အမှားအားဖြင့်ဆေးဝါးများတွေ့ပါကကူညီပေးခဲ့. ယခု, ငါတိကျသောပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်ကြောင်းဆေးဝါးများရှာဖွေနိုင်ပါ၏. ငါ၏အ dopamine activation လည်းနိမ့်သည်ငါ့နားလည်မှု (အစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့် 5HT2A ပြဿနာ), ဥပမာ, ငါ့ကိုနောက်တဖန် bupropion ယူစေ. ဒါဟာကူညီပေးခဲ့တယ်. My two horrible experiences running out of alprazolam were informative: alprazolam အဆိုပါ striatum အတွက် dopamine တိုးပွါး, ဒါပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှု bupropion သို့မဟုတ် modafinil အဖြစ်ရေရှည်တည်တံ့အဖြစ်အကြီးစားသို့မဟုတ်ရှည်လျားမဟုတ်ပါဘူး. ငါ့ dopamine အဆင့်ဆင့်နေဆဲသေးငယ်တဲ့နှောင့်အယှက်ကြီးမားအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိကြောင်းအလုံအလောက်အနိမ့်များမှာပြောတယ်. ထိုကွောငျ့, ကျွန်မအနေဖြင့် bupropion တိုးလာ 150 တနေ့သုံးကြိမ်မှတစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ် MG. ဒါဟာငါမျှော်လင့်ထားသည့်လက္ခဏာများတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးခဲ့သည်, ထိုသို့ငါမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူးတဲ့လက္ခဏာတိုးတက်: ကျွန်မအနေနဲ့အစာစားချင်စိတ်များ. နှစ်ပေါင်းများစွာ, ငါ့အစာစားချင်စိတ်ကိုအများအားဖြင့်လည်းမရှိခဲ့ချေခဲ့, နှင့်ကခက်ခဲငါ့ကိုစနစ်တကျစားရန်အဘို့အကို, which makes almost everything else in my life more difficult.
I am now taking 450 mg of bupropion per day, and that is the maximum dosage because anything higher has risks. I can change other medicines to improve my ability to cope. But there are many obstacles. Increasing bupropion and modafinil is expensive. I want to eliminate venlafaxine, omeprezole, and caffeine, but during the transition away from those medicines, I will have many problems. It would be dangerous for me to change those medicines while homeless. Some excellent supplements, ထိုကဲ့သို့သောသုံးမိုင်နိုအက်ဆစ်အဖြစ်, မေးလ်အမိန့်ဖြင့်တန်ဖိုးနည်းပေမယ့်မှသာရရှိနိုင်ပါ: အိုးမဲ့အိမ်မဲ့လူတို့အဘို့ခက်ခဲ. ကဖိန်းဓာတ် dopamine တိုးပွါး, so I can only stop taking it if I can find other ways to increase my dopamine.
ငါအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုလျှင်, ငါပိုကြီးတဲ့အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်, နှင့်အထက်အတားအဆီး ပို. ပင်ပြဿနာရှိပါတယ်.
ကူညီဖို့, ကလစ် ဒီမှာ.
5HT2A, Alprazolam, စိုးရိမ်ခြင်း, Bupropion, Caffeine, Coping, စီးပွားပျက်ကပ်, မသန်စွမ်းမှု, အိမ်မဲ့သူ, Modafinil, Omeprazole, ထိတ်လန့်ခြင်းရောဂါ, ဆင်းရဲခြင်း, PTSD, Serotonin withdrawal syndrome, Venlafaxine
⇐ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ < Previous post | Next post > What day is it? It’s Crisis Saturday! Yeah! ⇒